1 KORINTIANA 12.12-31 F. 1, 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 KORINTIANA 12.12-31 F. 1, 2
MIANARA MITADY SY MIHAZONA NY FIRAISANA AO ANATY FAHASAMIHAFANA
« Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy.… » (12-13). Ny tanjon’ny Apostoly Paoly dia ny hampahatsiaro ny kristiana ny maha iray antsika rehetra (13) fa raha tsy efa tena tafaray marina amin’ i Jesoa Kristy anefa ny olona iray dia tsy manana izany fanahin’ ny firaisana izany, fa ny manava-tena na manandratra ny anaram-piangonany na ny fikambanany no ataony ka ny toe-pony dia manilika ny hafa rehefa tsy mitovy aminy.
« Nefa ny momba ny tena tsy iray, fa maro.… » (14-20). Mila manaiky ny fahasamihafana isika, ary mifaly ny maha-izy azy ny tena fa tsy sanatria manambany na manao tsinotsinona ny tenanao (15-16). Tsarovy fa Andriamanitra mihitsy no nanao ny tsirairay ho tsy manan-tsahala, sarobidy, manana ny maha izy azy avy. Mila mianatra manaiky ny toerana sy ny maha-izy azy anao ianao.
“Ary ny maso tsy mahazo manao amin’ny tanana hoe: Tsy mila anao aho; … Tsy mila anareo aho..…” (21-26). Tsy misy afaka milaza fa mahavita tena fa mifampiankina ary mifameno isika mpanompon’Andriamanitra rehetra, mila mianatra mifanaja ary mifanome voninahitra isika araka ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika avy, raha mahatsiaro tena ho isan’ ny tenan’i Kristy marina tokoa.
“Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy.… (27-31). Andriamanitra manendry ny mpanompony araka izay fanomezam-pahasoavany avy (28) ho fampandrosoana ny fiangonany (28). Ao anatin’ny fahasamihafana tokoa no ahitana ny tena harena, fa mila fanetren-tena ny fanekena sy ny fanajana ny hafa eo amin’ny samy maha-mpanompon’Andriamanitra (29-30).
Saintsaino : « …dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra.» (Romana 12.5)